Halyeeyada Seville, laga soo bilaabo asalka jidadkeeda ilaa Pedro el Cruel | Wararka Safarka
Luis Martinez | | dhaqanka, Sevilla
Seville waa meel ku habboon oo loogu talagalay dhaqanka jecel, marka lagu daro kuwa aan dhammaadka lahayn qorshooyinka aad ka qaban karto magaalada, sheekooyinkooda iyo halyeeyadoodu waa tiro badan yihiin sida ay u qurux badan yihiin oo lala yaabo. Ogsoonow in asalkiisu uu dib ugulaabmayo ugu yaraan magaalada Roman ee Hispalis Waxaa aasaasay Julius Caesar qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga.
Sidii aysan taasi ku filnayn, magaalada Andalusiya waxay ku naalootay xoog aad u weyn waqtiyadii dhexe, markii ay dib u soo ceshateen hogamiyayaashii Castilia kadib markii ay dib u heleen Ferdinand III ee Saint sanadkii 1248. Iyo xitaa kaba sii badan waqtiga Austrias, markii ay noqotay dekeddii ugu horreysay ee ganacsi ee leh adduunyada cusub iyo xarunta dhaqaale ee boqortooyadii Isbaanishka. Taariikhda hodanka ah ee noocan oo kale ah waxay daruuri noqotay inay dhaliso sheekooyin badan oo mala awaal ah Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ogaato halyeeyada Seville, waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu xiisaha badan.
1 Sheekada Susona quruxda badan
2 Doña María Coronel iyo saliidda karkaraya
3 Madaxa King Pedro I, oo ah shaqsi caan ka ah halyeeyada Seville
4 Ninka dhagaxa
5 Taariikhda eeyaha, oo ah sheeko ka mid ah halyeeyadii Seville
6 Halyeeygii Calle Sierpes
Sheekada Susona quruxda badan
Rabshadihii rabshadaha watay ee magaalada ayaa ka muuqda sheekadan oo qayb ka ah halyeeyadii Seville. Ku soo noqoshada qarniyadii dhexe, waxaa jiray weerar ka dhacay xaafada Yuhuudda ee Seville, jawaab ahaanna, Yuhuuddu waxay la shirqooleen Mooryaan si ay ula wareegaan gacan ku haynta magaalada.
Si loo abaabulo qorshaha, waxay ku kulmeen guriga bangiga Diego Susón, oo gabadheeda caan ku ahayd quruxdeeda guud ahaan deegaanka. Waa la wacay Susana Ben Susón oo wuxuu xidhiidh qarsoodi ah la yeeshay nin da 'yar oo Masiixi ah oo mudane ah.
Tan iyo markii shirqoolka loo dhigay gurigiisa, wuxuu ogaa gacantiisa koowaad waxa ay ka koobnaan doonto. Qorshuhu wuxuu ahaa in la khaarajiyo odayaasha waaweyn ee magaalada. Iyaduna, iyada oo ka baqaysa nolosha jacaylkeeda, ayaa u tagtay inay u sheegto waxa jira. Isagu ma uusan garwaaqsanayn in, markii uu sidaas samaynayay, uu khatar gelinayay qoyskiisa iyo dhammaan Yuhuuddii Sevillian.
Mudanaha ayaan waqti badan ku qaadan inuu uga digo mas'uuliyiinta shirqoolka, kuwaas oo amar ku bixiyay in la soo xiro hogaamiyaasha shirqoolka, oo uu ku jiro Susona aabaheed. Iyaga ayaa la deldelay maalmo gudahood Tablada, Meel lagu toogto dambiilayaashii ugu xumaa magaalada.
Susona waxay ku matashay lebbiska jardiinada María Luisa ee Seville
Gabadha yar waxaa diidey dadkeeda oo u arkayey inay tahay khaa'in, iyo waliba ninka sharafta leh ee ay xiriirka la leedahay Iyo, halkan, halyeeygu wuxuu bixiyaa laba nooc. Marka loo eego kii ugu horreeyay, wuxuu weydiistay archpest-ka kaniisadda weyn caawimaad, Reginaldo ee Toledo, yaa ka bariyeelay oo soo farageliyay si ay ugu fariisato guri nimo ah. Dhinaca kale, tan labaad waxay leedahay waxay lahayd laba caruur ah oo leh wadaad wadaad ah, markii uu diiday kadib, waxay noqotay qof jecel ganacsade Sevillian ah.
Si kastaba ha noqotee, halyeeygu mar kale ayuu mideysan yahay dhammaadkiisa. Markii ay Susona dhimatay, dardaarankeedii waa la furay. Wuxuu yiri waan rajeeyay taas madaxa ayaa laga jaray waxaana la dhigay albaabka gurigiisa si markhaati looga dhigo dhibaatadiisa. Weli waad arki kartaa maanta, haddii aad dhex marto wadada dhimashada, leben ay ku jirto qalfoof taas oo uu ahaan lahaa guriga Susona. Xaqiiqdii, wadadaas ayaa sidoo kale loo yaqaan magaca gabadha.
Doña María Coronel iyo saliidda karkaraya
Halyeeygan ka socda Seville wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ka mid ah saabuunta opera, gaar ahaan jacaylka iyo rabitaanka aargoosiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay ina geynaysaa waqtiyadii dib loogu heshiiyey magaalada. Marwo Maria Coronel Waxay ahayd gabadh reer Castilian ah oo ay dhashay Mudane Alfonso Fernández Coronel, oo ahaa taageere Alfonso XI ee Castile. Isaguba wuu guursaday don Juan de la Cerda, oo isna ka dhex dagaallamayay difaaca wiilkiisa, Henry II, markii uu wajahay walaalkiis Pedro I dhaxalka carshiga.
Sababtaas awgeed, tan dambe ayaa khaarajisay don Juan de la Cerda oo la wareegtay dhammaan hantidiisii, isaga oo carmalka ka dhigay mid halaagsamay. Pedro shaqsiyan ma aanan aqoonin, laakiin markuu arkay iyada ayuu ahaa jacayl iyada. Si kastaba ha noqotee, Doña María Coronel ma aysan dooneynin inay la xiriirto qofka amray in la dilo ninkeeda oo galay kaniisada Sevillian ee Santa Clara.
Xitaa sidaas oo kale ma aysan helin Pedro I, oo sidoo kale loo yaqaan "Arxan daran," si uu uga tanaasulo isku daygiisa ah inuu iyada u ahaado naag addoon ah. Ilaa hal maalin, iyada oo ka dheregsan dabagalka boqortooyadeeda, waxay soo gashay jikada sariibta iyo saliid karkaraya ayaa lagu shubay wajiga oo dhan si loo qurxiyo. Sidan ayay ku guuleysatay inay Pedro I keligeed ka tagto.
Kaniisadda Santa Inés
Wuxuu wali awood u lahaa inuu goobjoog ka ahaado geerida boqorka gacanta walaalkiis Enrique II, oo hantidii lagala wareegay ku celiyey walaalaha Coronel maadaama uu daacad u ahaa qadiyadooda. Sidaa darteed, labadan marwo ayaa awooday inay helaan kiniisadda Santa Inés gurigii aabbihiis ku dhex yiil Abbess ugu horeysay wuxuu noqon lahaa, si sax ah, Doña María Coronel, oo ku dhimatay agagaarka 1411.
Madaxa King Pedro I, oo ah shaqsi caan ka ah halyeeyada Seville
Si sax ah boqorka Castilian arxan darada ah ayaa sidoo kale xiddigo ku leh halyeeyo kale oo badan oo Seville ah. Tusaale ahaan, midka aan kaaga sheekayn doono. Intii lagu guda jiray mid ka mid riwaayadihiisii ​​gariir ee magaalada, Pedro ayaa la kulmay Tiri wiilka Niebla, qoyska taageeray Henry II, sidaan kuu sheegnay walaalkiis. Seefyadu waqti dheer ma aysan soo bixin oo Dulmiga ayaa dilay midka kale.
Si kastaba ha noqotee, ducadii ayaa soo kacday naag duq ah inay laydh ku soo eegtay oo ay naxday markii ay aqoonsatay gacan ku dhiiglaha, ayay ku soo noqotay inay gurigeeda isku xidho, iyada oo aan hoos u dhigin laambada ay sidatay dhulka. Munaafaqnimada Pedro wuxuu u ballan qaaday qoyska dhibbanaha in Waxaan jari lahaa madaxa dambiilayaasha dhimashadiisa oo uu ku soo bandhigo fagaareyaasha.
Isaga oo og in ay aragtay islaantii duugga ahayd, ayuu ugu yeedhay horteeda si uu u waydiiyo cidda dambiilaha ah Islaantii waxay muraayad hor dhigtay boqorka hortiisa waxayna ku tiri "waxaad ku haysataa gacankudhiiglihii meesha." Kadib, Don Pedro wuxuu amar ku bixiyay in madaxa laga jaro mid ka mid ah taallo marmar ah in ay maamuuseen isaga iyo in lagu riday niche alwaax ah. Wuxuu sidoo kale amar ku bixiyay in sanduuqa looga tago isla wadadii ay rabshadu ka dhacday, laakiin inaan la furin ilaa dhimashadiisa.
Xitaa maanta waxaad ku arki kartaa bustaas dariiqa loo yaqaan, si hufan, Madaxa King Don Pedro. Iyo, in laxasuusto xaqiiqadan halyeeyga ah, midka kasoo horjeedka ah, ee uu markhaatigu ku noolaa, ayaa la yiraahdaa Wadada Candil.
Madaxa King Don Pedro
Waxaan sii wadaynaa qarniyadii dhexe si aan uga hadalno halyeeygan kale ee Seville. Waxay sheegaysaa in, qarnigii XNUMXaad, ay jireen meel lagu iibiyo gudaha Wadada Wanaagsan, oo ka tirsan xaafadda San Lorenzo, Halkaas oo ay ku istaageen dad nooc walba leh.
Marka, waxay caado u ahayd, sidii Karaamada Barakaysan, dadku way jilba joogsadeen. Markii koox ka mid ah asxaabta baarka joogtay ay maqleen inuu ku soo dhowaanayo, way baxeen oo jilba joogsadeen markay socodku socdeen. Dhammaan laakiin hal. Telefoonka Mateo «el Rubio» wuxuu rabay inuu noqdo halyeeyada asaga oo ku eedeeyay asxaabtiisa in la duceeyay, wuxuu cod dheer ku sheegay in uusan jilib dhigin.
Xilligaas, a ray rabaani ah ku dhacay nasiib darada Mateo oo jidhkiisa u rogay dhagax. Xitaa maanta waxaad ku arki kartaa nin jirkiisa walxahaas uu xirto waqtiga waqtiga Buen Rostro street, oo tan iyo markaas loo yaqaan, si hufan, Nin dhagax ah.
Taariikhda eeyaha, oo ah sheeko ka mid ah halyeeyadii Seville
Haddii aad horey u booqatay magaalada Andalus, waxaad si fiican u ogaan doontaa sida ay muhiimka ugu tahay dadka deggan Triana eey, magac ay caan ku baabtiisay Masiixa Dhammaadka. Toddobaad kasta oo Quduus ah walaaltinimadiisu waxay isaga kaxaysaa habsami u socodkeeda iyada oo ay ku hareeraysan yihiin jawi cakiran.
Ma ahan wax naga yaabin kara, sidaa darteed, in halyeeyada Seville ay jiraan dhowr kuwaas oo leh shaxdan sidii halyeeyga. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa midka aan hoosta kaaga sheegi doono.
Waxay sheegaysaa in wiil jiifa ah oo si sax ah loo magacaabay Ey Waxaan ka gudbey buundada Barcas maalin kasta anigoo ka imanaya Triana, ka dibna xaafad magaalada ka mid ah, una aaday Seville. Mid ka mid ah dadkii arkay isaga oo booqashadaas sameynaya ayaa bilaabay inuu taas ka shakiyo wuxuu booqan lahaa xaaskiisa. Taasi waa, inay la macaamil la yeelatay isaga xagga jidhka.
Masiixa Dhammaadka, oo loo yaqaan "eey"
Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu ku sugay dhinaciisa iibka Vela oo wuxuu ku dhuftay toddobo jeer. Dhawr qof ayaa u yimid qaylada wiilka oo ay ka badbaadi waayeen weerarka. Waxaa ka mid ahaa farshaxan-sameeyaha Francisco Ruiz Gijón, yaa aakhirka noqon doona qoraaga sawirka Masiixa Dhamaystirka.
Waxaa la sheegay in isaga, oo ka naxay xanuunka wiilka dhalinyarada ah, uu wajigiisa u waxyooday inuu sawiro kan Masiixa caanka ah. Dhanka kale, ma booqan doono xaaskiisa gacan ku dhiiglaha, laakiin waxay ahayd walaashiis oo aan cidina ogeyn sidaa darteed kulamadooda waxay ahaayeen qarsoodi.
Halyeeygii Calle Sierpes
Wadadan dhexe waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Seville, laakiin maahan in dadka magaalada deggan oo dhami ay garanayaan sababta magaceeda, taas oo waliba sabab u ah halyeeyga Seville. Waxay dhahaan taas, dib ugu laaban qarnigii XNUMXaad, wixii markaa la odhan jiray Wadada Espalderos Carruurtu waxay bilaabeen inay baaba'aan sabab la'aan.
Dib dambe looma maqal waxayna xaaladdan xiisaha leh argagax ku abuurtay dadka deggan aagga. Kadib boqortooyada Seville, Alfonso de Cárdenas, ma garanayo waxa la sameeyo. Ilaa uu maxbuusku u soo bandhigay inuu xaliyo qarsoodiga isagoo ku beddelaya xoriyadiisa.
Era Melchor de Quintana oo wuxuu u xidhnaa ka qaybqaadashadii kacdoonkii ka dhanka ahaa boqorka. Boqorka ayaa aqbalay ka dibna ninkii la xukumay ayaa u horseeday meeshii ay jirtay a mas weyn qiyaastii labaatan dhudhun. Toorey ayaa ku jirtay wuuna dhintay. Waxay ahayd Melchior laftiisa kan ka hor yimid oo dilay.
Maska ama abeesada waxaa lagu soo bandhigay Calle Espalderos si loo qanciyo dadka deggan. Waxaa la sheegay inay ka yimaadeen inay ka daawadaan dhammaan xaafadaha magaalada, tan iyo markaasna, waddada ayaa loo yeeray ee Sierpes-ka.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay halyeeyadii ugu caansanaa ee Seville. Waxaa jira kuwa kale oo badan oo la mid ah Masiixa Awooda Weyn, ee Santa Librada ama kan ah Awliyo Justa iyo Rufina. Laakiin sheekooyinkaas waa laga tegi doonaa wakhti kale. Hadaad magaalada joogto, ku raaxayso. Waanu kaa tagnay halkan xiriirkan liistada safarada aad ka sameyn karto Seville haddii ay dhacdo inaad waqti u hesho si aad u sahamiso hareeraha, kama qoomameyn doontid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Sevilla » Halyeeyada Seville